अराजक शब्दहरु: 01/03/21
अख्तियार जस्ता निकायहरू राज्य कब्जा (स्टेट क्याप्चर) को सिकार भएका छन् ।
सत्तालाई प्रश्न गर्ने र सत्ताको अपराधविरुद्ध आवाज उठाउने चेतनशील नागरिकको देशमा खडेरी देखिन्छ । नागरिक या त यो राजनीतिक दल वा त्यो दलमा विभक्त भएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि दुइटा काम महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च प्रशासकको निष्पक्ष रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यसका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र सबल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संरचनाहरूको निर्माण आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अहिले गर्नैपर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र कानुनी दायराको पुनर्संरचना नै हो ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 4:21:00 PM No comments:
कसैप्रति उत्तरदायी नहुने यो सरकार कामचलाऊ मात्र हो-विमल कोईराला
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गरियो भन्‍ने उल्लेख छैन । यस्तो पनि हुन्‍छ ? यो त जवाफदेहिताविहीन शैली हो ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएपछि जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता हो । तर किटानी जवाफदेहिता संसद्‌भित्र हो । संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो ।
जब चुनावको मिति घोषणा हुन्‍छ, तब कर्मचारी कार्यकारीकै भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यस्तो बेलामा अरु लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘भोट अफ एकाउन्ट’ पध्दति लागू हुन्‍छ ।
‘भोट अफ एकाउन्ट' भनेको के हो ? -यो सरकारलाई पूरा बजेट ल्याउने अधिकार हुन्‍न । सरकारले केवल दैनिक कामचलाऊका निम्ति मात्रै बजेट खर्चन सक्छ । त्यसलार्ई ‘भोट अफ एकाउन्ट’ भनिन्‍छ ।
कानुनमा अनैतिक काम गर्नु हुँदैन भनी लेखिएको त छैन । त्यो नैतिकतालाई केले बाँध्‍ने ? त्यसलाई आचरणले बाँध्ने हो ।
संक्रमणकालमा कर्मचारी नेतृत्वको आँट परीक्षण हुन्‍छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको शुध्दताको पनि परीक्षण हुन्‍छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 4:16:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 4:07:00 PM No comments: